जितेको रकममध्ये १ हजार आमालाई दिन्छु, बाँकी शरणार्थीका लागि एम्बुलेन्स सहयोग गर्छु – किरण गजमेर - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार जितेको रकममध्ये १ हजार आमालाई दिन्छु, बाँकी शरणार्थीका लागि एम्बुलेन्स सहयोग गर्छु...
जितेको रकममध्ये १ हजार आमालाई दिन्छु, बाँकी शरणार्थीका लागि एम्बुलेन्स सहयोग गर्छु – किरण गजमेर
गायन रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को उपाधि विजेता किरण गजमेरले आफूले पाएको पुरस्कार रकमबाट शरणार्थी शिविरका नागरिकलाई दुई वटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने भएका छन्। शनिबार मध्यरातमा सर्वाधिक भोट मार्फत विजेता बनेका उनले आफूले पुरस्कारमा पाएको २५ लाख रकममध्येबाट शरणार्थीका लागि दुई वटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
विगतमा आफूले शरणार्थी जीवन बिताउँदा उपचारकै अभावमा हजुरआमा गुमाएको स्मरण गर्दै गजमेरले एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने बताएका हुन्। ‘आफूले जितेको २५ लाखमध्ये एक हजार रूपैयाँ आमालाई दिन्छु। अरू पैसाले दुई वटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्छु र बाकि रहेको पैसाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाउनबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्छु,’ उनले विजेता भएपछि भने।
एक हप्तासम्म दर्शकले गरेको भोटका आधारमा ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’को उपाधिको छिनोफानो भएको हो । उनले आर्यन तामाङ, ज्वाला राई र तारा श्रीष मगरलाई पछि पार्दै भ्वाइस अफ नेपाल सिजिन ३ को उपाधि जितेका हुन्। हाल अमेरिका बस्दै आएका किरण झापाको खुदुनाबारीमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका हुन्।
Previous articleहामीलाई किन हाच्छ्युँ आउँछ ? जान्नुहोस् यस्ता छन् कारणहरु
Next articleयी हुन् काठमाडौंमा दोस्रो डोज अष्ट्राजेनिका खोप लगाउने केन्द्र